Put စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
ဒီသတင်းပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ ထားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Put ကို အခြေခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Put one’s foot down, Put someone in his place နဲ့ Put the squeeze on တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Put one’s foot down
Put (ထားတာ၊ ချထားတာ)၊ one’s (တဦးတယောက်ရဲ့ )၊ foot (ခြေထောက်)၊ down (အောက်) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကလူတဦးတယောက်က သူ့ရဲ့  ခြေထောက်ကို အောက်ကိုဆောင့်ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကို အောက်ကိုဆောင့်ချလိုက်တဲ့အပြုအမူမျိုးတွေ့ရင် တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြင်နေ၊ တွေ့နေ၊ ဖြစ်နေတာမသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ဆက်မဖြစ်သင့်ဘူး၊ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ ပြောတာနဲ့တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း အလားတူပါပဲ။ ကိစ္စတခုခုမှာ မဖြစ်သင့်တာကို ဟန့်တားတာ တနည်း အမိန့်ထုတ်ထားတာမျိုး၊ တားမြစ်ထားတာမျိုး၊ အပြတ်သတိပေးထားတာမျိုးကို ဒီအီဒီယံနဲ့ ရည်ညွှန်းသုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Put one’s foot down အသုံးအနှုန်း ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John was always late for work. So , his boss put his foot down and gave himaserious warning.
John က အမြဲတမ်း အလုပ်ကို နောက်ကျတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ဆရာသမားက ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ လေးလေးနက်နက် သတိပေးလိုက်တယ်။
(၂) Put someone in his place
Put (ထားလိုက်တာ)၊ someone (တဦးတယောက်ရဲ့ ) in (အထဲမှာ) his (အဲဒီလူရဲ့ ) place (နေရာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးကို သူ့နေရာရောက်အောင် ထားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ ကိုယ့်ကို တဦးတယောက်က စော်ကားရာရောက်စေမယ့်၊ စိတ်တိုစေမယ့် စကားမျိုး လာပြောတယ်၊ အပြုအမူမျိုး ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ခံမနေဘဲ၊ တန်ရာတန်ရာလုပ်ဖို့၊ သူ့နေရာနဲ့သူ နေတတ်ဖို့ ပြန်ပြောတာ၊ တနည်း ကိုယ့်နေရာကိုယ် သိတတ်ဖို့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာဘန်းစကားမှာတော့ ရာရာစစ တန်ရာတန်ရာနေဖို့ပြောတာနဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Put someone in his place အသုံးအနှုန်း ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The new trainee is trying to boss others around. He needs to be put in his place.
အဲဒီ အလုပ်သင်သစ်က တခြား လူတွေကို လိုက်ပြီးဆရာလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ နေတတ်အောင် လုပ်ဖို့လိုနေပြီ။
(၃) Put the squeeze on
Put (ထားတာ)၊ the squeeze (ညှစ်တာ) on (အပေါ်) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ညှစ်ဖို့လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ လူတဦးဦးကို တခုခု လုပ်ရလေအောင် ဖိအားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတင်းမဖြစ်မနေ လုပ်ခိုင်းတာမျိုး၊ အကြပ်ကိုင်တာမျိုး ၊ လာပြီး လည်းပင်ညှစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကျမတို့ မြန်မာဘန်းစကားနဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ Put the squeeze on အသုံးအနှုန်း ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Tom did not want to work overtime, but his boss put the squeeze on him.
Tom က အချိန်ပိုအလုပ် မဆင်းချင်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆရာသမားက အတင်းမဖြစ်မနေ ဆင်းခိုင်းတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Idioms အသုံးအနှုန်းတွေက Put one’s foot down, Put someone in his place နဲ့ Put the squeeze on တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Put စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ